Bangaphi ubuso kwi-imeyile yakho yamva nje? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 3, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Ndifumana ngaphezulu kwe-imeyile ezifanelekileyo ezili-100 ngosuku… Ndiyazi ukuba iyaphazamisa loo nto. Kuyaphazamisa ngakumbi xa i-imeyile ingeyiyo loo nto. Injalo imeko ngee-imeyile ze-LinkedIn ezindixelela ngabantu kwinethiwekhi yam abatshintshe izihloko zomsebenzi. Andikwazi ukunceda kodwa ndikhangele ebusweni kwaye ucofe-ukujonga ukuba kwenzeka ntoni ngaba bantu kunye nemisebenzi yabo. Ndiqinisekile ukuba le imeyile ye-LinkedIn inelinye lawona manqanaba aphezulu okucofa kumzi mveliso we-imeyile.
Ndifumana ii-imeyile imini yonke kwiindawo zonxibelelwano ezinamagama kunye nokutshintsha kwemeko yabantu ngaphakathi kwabo, kodwa kunqabile ukuba ndingene nzulu. Xa kukho ifoto, nangona kunjalo, ndikhawuleza ndalungiswa kwaye kufuneka ndicofe. Indenza ndizibuze… ingaba sele ulibonile inani leenkcukacha kwii-CTRs ze-imeyile ezineefoto (hayi iifoto zesitokhwe) zabantu? Uqikelelo lwam kukuba xa ubeka ubuso bokwenyani kwii-imeyile zakho, uya kufumana iziphumo zokwenyani.
Agasti 4, 2011 kwi-7: 15 AM
Ngaba uthetha ngokongeza ifoto kwisiginitsha?
Agasti 4, 2011 ngo-8: 04 PM
Mhlawumbi kwisiginitsha, uKenneth! Ndicinga ukuba iifoto zabantu zihlala zinyanzelisa- ziyanyanzeleka kunombhalo.
Agasti 5, 2011 kwi-12: 06 AM
Mhlawumbi ifoto yokutyikitya! Ndicinga ukuba abantu kuya kufuneka baskrolele ezantsi ngenxa yoko. Ndifuna ukwazi ukuba okanye hayi ukongeza iifoto zabaxhasi kunye nabasebenzi ngokulula kunceda ukwenza i-imeyile ngokwakho kwaye kuyenze ibe nomtsalane ngakumbi kubafundi. Yinto esinokufuna ukuyivavanya!